कुलमान र गोविन्दका जनताहरु « Nepal Bahas
कुलमान र गोविन्दका जनताहरु
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:४६
सन् २०११ अगस्त १६ मा भारतका चर्चित अभियन्ता अन्ना हजारेले दिल्लीमा अनशन शुरु गर्दा भारतीय सरकार झनझन कठोर बन्दै थियो ।हजारेको अनशनमा दिनप्रतिदिन भारतीय जनताको साथ बढ्दै गयो । अन्ततः हजारेकै माग बमोजिमको भ्रष्टाचार विरुद्ध तयार गरिएको लोकपाल विधेयक संसदमा पेश गर्न सरकार राजी भयो । हजारेको जोडवलले सन २०१३ मा ‘लोकपाल विधेयक’ भारतको संसदबाट पारित भयो । जुन विधेयक भारतमा अहिलेसम्मकै भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न बनेको कठोर कानुन मानिन्छ ।
हजारेले यो अभियान आफु नेता हुनका लागि गरेका थिएनन् । आफु मन्त्री हुने स्वार्थमा अनशन बसेका थिएनन् । बरु, त्यो आन्दोलनमा सहयात्री बनेका युवा नेता अरविन्द केजरीवाल दिल्लीमा तीन पटकसम्म मुख्यमन्त्री बने । हजारेको आन्दोलनमा सहभागी नभएको भए सायद केजरीवालको आम आदमी पार्टीले दिल्ली राज्यमा पकड जमाउन नसक्ने अड्कलबाजी धेरैको छ ।
केजरीवालले हजारेको माग बमोजिम युवा वर्गलाई समेटेर दिल्लीमा केही सुधारका प्रयास जारी राखेका छन् । दिल्लीमा जब केजरीवाल नेतृत्वमा आए, तब अन्य पार्टी भन्दा आम आदमी पार्टी निकै लोकप्रिय बन्यो । यसको कारण थियो, अन्ना हजारेको निस्वार्थपुर्ण अभियानमा केजरीवालको सहभागिता । जीवनभर आन्दोलन र भोक हड्ताल गरेपनि हजारे सरकारी लाभको पदमा गएनन् । दर्जनौं पटक अनशन र जीवनभर सामाजिक सुधारमा खटिएका हजारे सधैं सरकारको विपक्षी बनिरहे ।
हजारेले जुन–जुन कालखण्डमा अभियान चलाए, सरकारमा हुने हरेक दलले उनलाई विपक्षीको उक्साहटमा हजारेले जनता उचालेको आरोप लगाउँथे । भारतीय शासकले उनलाई स्वार्थी व्यक्तिको रुपमा चित्रण गथ्र्यो । तर, ८३ बर्षको यो उमेरसम्म उनले कुनै पद हाँसिल गरेका छैनन् । राज्यले उनीमाथि लगाएका आरोपहरु झुठ सावित भइसकेका छन् ।
सडकमा सामान्य अभियन्ताहरुका पछि जनता कुदेका छन् । तर, नेताका पछि जनता टाढिएका छन् । फाइदा लिन सकेका मुठ्ठीभरका कार्यकर्ता मात्र नेतासँग छन् । अन्यथा सारा जनता अहिले सबै नेताबाट आजित छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भुमिका जनहित विपरित रह्यो ।
समाजमा अधिकांश व्यक्तिको स्वभाव एकअर्कासँग मिल्दैन । व्यक्तिपिच्छेकाे सोच्ने शक्ति र मनसाय फरक–फरक हुन्छ । तर, केही व्यक्तिका सोचहरु संयोगले जोडिएका हुन्छन् । विश्वका इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने कुनै एक भुगोलको एउटा पात्र अर्को भुभागको व्यक्तिको स्वभावसँग दुरुस्त हुने गरेका उदाहरण छन् । दुरीले टाढा भएपनि ती व्यक्तिका मनसाय एकाकार हुने गर्छन् ।
यस्तै अपवादका पात्रहरु हुन्, डा.गोविन्द केसी र अन्ना हजारे । भारतका अन्ना हजारेसँग नेपालका डा. गोविन्द केसीका शैली मिल्दाजुल्दा छन् । सत्तास्वार्थ भन्दा टाढा रहेर केसीले १९ पटकसम्म अनशन बस्दा जनता उनका पक्षमा जुट्दै गए । तर, शासक झन–झन कठोर बन्दै गयो ।मानौं, केसीका माग उनका व्यक्तिगत लाभका लागि हुन् भने झैं सरकारले निकै उपेक्षा गर्दे गयो । पछिल्लो पटक १९ औं चरणको अनशन तोड्न सरकारले गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा अझै जनता विश्वस्त देखिएका छैनन् । किनकी, १८ औं चरणसम्मका अनशनमा भएका सम्झौतालाई सरकारले पुरै उपेक्षा गरिसकेको विगतको तितो अनुभव छ ।
जनता किन नेताबाट बिच्किए ?
अहिले सबै दलका नेताहरुसँग जनताको भरोसा टुटेको छ । कसैप्रति जनताको विश्वास छैन । सडकमा सामान्य अभियन्ताहरुका पछि जनता कुदेका छन् । तर, नेताका पछि जनता टाढिएका छन् । फाइदा लिन सकेका मुठ्ठीभरका कार्यकर्ता मात्र नेतासँग छन् । अन्यथा सारा जनता अहिले सबै नेताबाट आजित छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भुमिका जनहित विपरित रह्यो ।
खासगरि, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी संचालन र सरकार चलाउने प्रक्रियामा जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न चाहेनन् । उनको शैली निरंकुश बन्दै गयो । अहिले सत्तारुढ नेकपा विवादको दलदलमा फसिसकेको छ । नेकपाको विवादले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।
उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस निरन्तर अन्धकारमै रुमल्लिएको छ । जब चुनावमा नराम्रोसँग पराजित बन्यो, तबदेखि कांग्रेसको पाइला अघि बढ्न सकेन । कांग्रेसले आत्ममुल्यांकन गर्ने प्रयास थालेन । प्रतिपक्षमा कुनै गतिलो भुमिका बन्न सकेन । बरु, जनहित विपरित काम गर्ने सत्तारुढ नेकपाको सहयोगी बन्दै गयो ।
सत्ता संचालनमा नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षमा नेपाली कांंग्रेस असफल भइसकेका छन् । यो अवस्थामा जनता पुरै निराश बनेका छन् । अबको दुई बर्ष भित्र स्थानीय निकायको चुनाव शुरु हुनेछ । देशका दुई ठुला दलहरुको कार्यप्रति जनताले दिने मत अब विभक्त हुने निश्चित छ । यो अन्योलको अबस्थामा अहिलेसम्म कुनै वैकल्पिक शक्ति तयार भइसकेको छैन । नयाँ जुझारुका साथ आएको साझा पार्टी पनि पुरानै पार्टीहरुका शैलीमा अघि बढेको आभास जनताले गरेका छन् ।
अर्को विवेकशील पार्टी त खास दलको रुपमा उदाउनै सकेको छैन । यी दुवै समुह एकिकरण हुने संकेत यिनका नेताहरुले देखाएका त छन् । तर, भावी दिनमा कुन दिशातर्फ लाग्ने हुन्, कुनै खाका तयार भइसकेको अहिलेसम्म कुनै सार्बजनिक भएको छैन ।
उता, पुराना पञ्चहरुको गठजोडबाट बनेको राप्रपा भित्रको मतभिन्नता झन् बल्झिंदो छ । तीनजना अध्यक्ष कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा, प्रकाशचन्द्र लोहनीको दम्भले पार्टीको विस्तार हुन सकेको छैन् । अर्कोतर्फ, मधेशवादी दलहरु झन् अधोगतितर्फ उन्मुख छन् । पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मधेशवादीहरुसँग मिलेपनि पार्टी संचालनका प्रक्रियामा उनको कुनै भुमिका छैन् ।
अब नेपालमा पनि भारतमा झैं कुनै नयाँ अभियानमा सरिक शक्ति राजनीति दलको बिकल्पको रुपमा आउनैपर्ने हुन्छ । यसले दुई प्रकारले जनतालाई फाइदा हुन्छ । पहिलो, यी दुई ठुला दललाई संच्चिने मौका र अर्को जनतामा देखिएको नैराश्यता हटाउने विकल्प । यसले देशलाई नयाँ दिशा दिनेछ । नयाँ आउने शक्तिबाट देश भित्र बढेको चरम बेथितीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने सहयोगी बन्नेछ ।
अहिले नेपालको राजनीति आकाशमा जनताले इच्छाएको पार्टीको स्थान खाली जस्तै छ । अब नयाँ विकल्प नसोच्ने हो भने आउने चुनावी परिणाम फेरि पनि देश र जनताका लागि प्रत्युपादक हुने निश्चित छ । यसको उदाहरण भारतको राजधानी दिल्लीलाई हेर्न सकिन्छ । भारतीय कंग्रेसले जनताको पक्षमा काम नगर्न नसक्दा एकाएक उदाएको भारतीय जनता दल पछिल्लो पटक लगातार दुई कार्यकाल सत्तामा कायम रहेको छ ।
तर, दिल्ली राज्यमा यी दुवै दलप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गयो । फलस्वरुप, अन्ना हजारेको सहयोगमा केजरीवालको आम आदमी पार्टीले पकड जमायो । यसको खास कारण थियो, मंहगी बढ्नु । यी दुई ठुला दलले जनताको पक्षमा कामै गर्न सकेनन् भन्ने एजेण्डाले दिल्लीमा प्रभाव पार्दे गयो । केजरीवालले चुनाव जितेपछि विभिन्न सरकारी महशुललाई गरिबीको रेखामुनीका जनताका लागि सस्तो बनाईदिए । पछिल्लो पटक दिल्लीको शासनमा केही न केही सुधार आएको दिल्लीबासीले महसुस गरेका छन् ।
जनता भनेको खास युवावर्ग हो । युवाको तप्काले देशलाई सही मार्गमा लान सक्छ । अहिले सडकमा युवाहरुको जमात अभियन्ताहरुको पछि छन् । यी युवाहरुलाई ठुला दलहरुको पटक्कै भरोसा छैन । देशको पक्षमा र जनताको लागि कस्ले के बोल्छ र काम गर्छ भन्ने यो युवा जमात पर्खाइमा छ । यी युवाहरु कहिले कुलमानको पक्षमा आवाज उठाउँछन्, कहिले गोविन्द केसीको पक्षमा बोल्छन् ।
दलरहित यो आवाजको जनमत ठुलो छ । यसलाई समेटेर नयाँ शक्तिको उदय तत्काल आवश्यक छ । यसका लागि, तमाम राजनीतिका जानकार, बुद्धिजिवी, समाजसेवी, अभियन्ताहरु र सबै युवाहरु एकस्थानमा जुट्नुपर्छ । अहिलेको आवस्यकता यहि हो । नत्र, कांग्रेस र कम्युनिष्टको अर्कण्यमता शैलीबाट दलदलमा भासिएको मुलुक फेरि कहिल्यै उठ्न सक्ने छैन ।